कम्तिमा एक साता लकडाउन थप्ने तयारी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/कम्तिमा एक साता लकडाउन थप्ने तयारी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै !!!
सरकारले कोरोना भाइरसको रोक`थामका लागि झण्डै डेढ महिनादेखि जारी राखेको लक-डाउन पुन थप गर्ने भएको छ । कोरोना जो`खिम अहिले पनि उच्च रहेको भन्दै सरकारले एक साताभन्दा बढी लकडाउन लम्ब्या`उने तयारी गरेको हो ।
कोरोना रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मंगलबार प्रधान`मन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लक`डाउन अवधि थ`प्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले लक`डाउन लम्ब्याउन सिफारिस गरे सँगै लक डाउन पुन बढ्ने भएको खबर राजधानी दैनिकमा छापि`एको छ।
समितिको बैठकले तत्काल नै लकडा उन खोल्न नसकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । बुधबार बस्ने मन्त्रि परिषद् बैठकले लकडाउन थपबारे निर्णय गर्नेछ । मन्त्रि`परिषद् बैठक बुधबार ११ बजेका लागि बोलाइ`एको छ !
मंगलबार प्रधानमन्त्री सहित बसेको कोरोना रोक`थाम तथा उच्च स्तरीय समितिको बैठकले लक-डाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोना प्रभा`वित क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर मोडल परिवर्तन गर्न सकिने बारेमा समेत छल-फल हुँदै आएपनि प्रधान-मन्त्री के.पी.ओली लक-डाउनलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।